Fampiharana finday: Fa maninona no manangana, inona no hanangana, ahoana ny fampiroboroboana azy | Martech Zone
Zoma, Jolay 24, 2015 Alakamisy, Jolay 23, 2015 Douglas Karr
Hitanay fa nahomby ny orinasa tamin'ny alàlan'ny fampiharana finday sy orinasa hafa tena nitolona. Ny fototry ny ankamaroan'ny fahombiazana dia ny lanja na ny fialamboly nateraky ny fampiharana finday ho lohany na ho an'ny mpanjifa. Ny fototr'ireo ankamaroan'ny fampiharana mitolona dia ny fanandramana tsy dia fahaizan'ny mpampiasa, ny fitiavam-bola tafahoatra, tsy misy lanja firy ho an'ny mpampiasa. Nahita fampiharana finday mahatalanjona koa izahay izay novolavolaina nefa tsy natsangana velively noho ny ezaka fanentanana malemy.
Ny fampandrosoana ny finday dia mitohy mihena hatrany amin'ny vidiny satria maro ny orinasa manangana rafitra sy sehatra fampiharana finday. Raha ny marina dia nampiditra olana marobe tamin'ny indostria izany satria izao dia samy mamoaka fampiharana avokoa ny tsirairay. Ny olana dia tsy ampy ny vola laniana amin'ny fanandramana ataon'ny mpampiasa, ny traikefan'ny mpampiasa ary ny fampiroboroboana… izay tena mahomby na manimba ny fahombiazan'ny fampiharana finday.
Mbola raharaham-barotra mendrika ny hampiasa vola, mila mahita ireo mpiara-miombon'antoka mety fotsiny ianao. Ny fampiharana finday dia afaka manatsara ny tsy fivadihan'ny orinasa ary mampitombo ny varotrao. Ohatra, nanangana rindranasa fiovam-po tsotra ho an'ny orinasa simika iray izahay izay nanampy ny mpanjifany hanao kajy fiovam-po marina nefa tsy tokony hiverina any amin'ny birao misy azy ireo. Ary, mazava ho azy, ny fampiharana dia manana fisehoana tsindrio-amin'ny-antso ahafahan'izy ireo miantso ny mpanjifanay fotsiny mba hanampy na hanao baiko.
18% amin'ireo mpivarotra 500 ambony any Angletera ary 50% mahery any Etazonia no manolotra fampiharana transactional ho an'ny mpanjifa. Miaraka amin'ny antsasaky ny mpampiasa finday mitodika any amin'ny apps handraisana fanapahan-kevitra momba ny fividianana entana, ny marika dia tsy maintsy manokana fotoana handinihana ny filan'ny mpanjifa ary hamoronana traikefa amin'ny fampiharana izay mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa. Saingy alohan'ny handefasana ny rindrambaiko lehibe manaraka dia misy teboka lehibe tsy tokony ho adino.
Fandraisana an-tsoratra lehibe avy amin'ny sary farany nataon'i Usablenet:
Ny ampahatelon'ny mpampiasa fampiharana finday dia manaisotra ny fampiharana satria tsy liana intsony
30% amin'ireo mpampiasa fampiharana finday no mampiasa fampiharana indray raha manome fihenam-bidy
2 / 3rds mpampiasa haino aman-jery finday manerantany mihevitra fa tena ilaina ny mangarahara
Ny 54% amin'ny millennial manerantany dia milaza fa ny traikefa mahantra amin'ny finday dia hampihena ny mety hampiasan'izy ireo vokatra hafa an'ny orinasa.
Vakio bebe kokoa momba ny famolavolana tetikady fampiharana finday mety indrindra ao amin'ny Usablenet's maimaim-poana Torolàlana ho an'ny fampiharana finday.
Tags: finday fampiharanafampiharana ny findaytraikefa amin'ny findayfampiasana findayfampiasana fampiharana finday